Isifundo eJamani I-2021 yeFom yeSicelo eFundisiweyo eFortal: Iindaba zeSikolo zangoku
Isifundo eJamani iScholarship eFundly ngokupheleleyo: EJamani, imfundo yenziwa lula. Kukho izifundiswa ezenza oku kwenzeke. Kwakhona, ezinye zezi nkxaso mali ziza neephakeji ezimangalisayo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngezi wokuya, Nika ingqalelo ulwazi kweli nqaku. Kule nqaku, uya kufunda ukuba / ungayifaka njani le mfundo.
Isifundo esimangalisayo eJamani iScholarship eFundly ngokupheleleyo ye2021
Ezi zilandelayo zilandelayo Isifundo eJamani sifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo:
1. I-DAAD Scholarship yaseJamani kwizifundo ezinxulumene-nesidanga sokuqala
Olu lolunye uphando eJamani luxhaswe ngokupheleleyo scholarship. Kwakhona, igubungela zombini iiMasters kunye neDigital Degree. Kwaye ibonelelwe yiNkonzo yokuTshintshiselana ngezifundo yaseJamani (i-DAAD).
Ngapha koko, inika abafundi abaphuma kumazwe angaphandle kuphuhliso nakwilizwe elitsha elinamashishini ithuba elihle. Ikwagubungela lonke uqeqesho. Kwaye iyanceda amazwe abaphumeleleyo uthathe isidanga sokuqala okanye Isidanga semasters kwilizwe okanye elaziwayo ngurhulumente IYunivesithi yaseJamani.
Kwakhona, kwiimeko ezizodwa, iyabanceda ukuba bathathe iqondo logqirha. Kwaye ufumane isiqinisekiso seyunivesithi (Master's / PhD) eJamani. Nangona kunjalo, ijolise kwiingcali zolutsha ezivela kumazwe asaphuhlayo.
Imali Award: Iingxowa-mali zibandakanya iintlawulo zenyanga nge-850 zama-euro zabafundi abaphumeleleyo. Kunye nee-1,200 zama-Euro zabagqatswa abagqirha.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka asebenzele igunya likarhulumente okanye urhulumente okanye inkampani yabucala kwilizwe elisaphuhlayo. Kwakhona, kufuneka ubambe isidanga seBachelor. Kwaye kufuneka ukuba ugqibe isidanga semfundo ngeziphumo ezingaphezulu kakhulu komndilili. Ukongeza, iidigri zakhe zemfundo akufuneki zibe ngaphezulu kweminyaka eyi-6.
Umhla wokugqibela: Nge-Agasti-Okthobha, ngo-2021.
2. I-KAAD Scholarship eJamani yaMazwe aKhulayo
Izifundo zeKAAD zibhekiswa kumfundi ophumelele izidanga. Kwakhona, baya kwizifundiswa esele zifumene amava obuchule. Kwaye kwabo banomdla kwizifundo zesidanga sokuqala eJamani.
Kwakhona, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nkxaso mali ijolise kubemi bamazwe akhethiweyo asakhulayo okanye asakhulayo eAfrika. Kwakhona, abo baseAsia, Middle East okanye Latin America. Nangona kunjalo, kukho ukhetho lwabafakizicelo bamaKatolika. Nangona kunjalo, ungandwendwela ikhonkco elingezantsi ngolwazi oluthe kratya.
Imali Award: Akuchazwanga. Nangona kunjalo, unokufaka isicelo kwikhonkco elingezantsi ngeenkcukacha.
mfuneko: Abafaki zicelo zeMasters-scholarship kufuneka babeneminyaka yobudala eyi-30. Ngelixa abafaki-zicelo be-PhD-yezifundo akufuneki ukuba babe badala kune-35. Kwaye kufuneka ube neyunivesithi.
Umhla wokugqibela:Ngomhla we-15 kuJanuwari / 30 kuJuni rhoqo ngonyaka.
3. IFududdannelse.dk uzinzo kwisifundi
Esi sisibonelelo sokubonelela nge-Finduddannelse DK. Le yenye yesifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Kwi- finduddannelse.dk kukholelwa ukuba abafundi banamhlanje, ngophando kunye nokubekwa emisebenzini kwixesha elizayo banokunceda ukubumba umhlaba wangomso ngendlela elungileyo.
Ke ngoko, isidingo sokubonelela isifundi ukuya kuthi ga kwi-5000 yexabiso kubalulekile. Kwaye kukunceda ukuhlawula iifizi zokufunda kunye nokwenza ukuba inyathelo elinye libe kufutshane, ngethemba, ubizo oluguqula umhlaba.
Kwakhona, izifundiswa ziya kunikwa isemester yokuwa / yasekwindla ye-2021. Kwaye ivulelekile kubantu abavela naphi na emhlabeni abafuna ukufunda inkqubo yenkosi Oko kuluncedo ekwenzeni umhlaba uzinze ngakumbi.
Imali Award: € 5000.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka afake isicelo (okanye uya kusebenza) kwinkqubo yenkosi enokumnceda ukuba enze umhlaba uzinze ngakumbi. Kwakhona, kufuneka ufake isicelo (okanye uza kufaka isicelo) kwisifundo esiqala kwiSemester yokuwa 2021.Bamba isidanga esisebenzayo.
Umhla wokugqibela: I-12 ngo-Epreli, i-2021.
4.IELTS yoVavanyo yokuBhatala iMali yokuHlola
Isatifikethi se-IELTS sinakho ukuvula eminye iminyango yabafundi bamanye amazwe kwizifundo. Kwakhona, kunye nokwakha umsebenzi.
Ngapha koko, kuqikelelo, malunga nezigidi ezi-5 zabafundi bavela kwiimviwo ze-IELTS ezivela kwizizwe ezili-140 ngonyaka.
Ngelixa baninzi abafundi abanetalente abanakho ukucacisa olu viwo lwe-IELTS kumabanga amahle, qaphela. Nangona kunjalo, ngenxa yeengxaki zemali abo bafundi bayayeka ukuthatha uviwo lwe-IELTS. Yiyo loo nto le mfundo ifuneka njengoko ixhasa imali yabo yovavanyo ye-IELTS.
Imali Award: Ayichazwanga.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abe phantsi kweminyaka engama-32 ubudala. Kwakhona, kufuneka ukuba usicosile iSikolo samaBanga aPhakamileyo ubuncinci amanqaku angama-75%. Ngaphaya koko, kufuneka ukuba icoca iikhosi ezingaphantsi kwe-3.0 GPA. Nangona kunjalo, unokufumana iinkcukacha ezithe kratya kwikhonkco lesicelo elingezantsi.
Umhla wokugqibela: Nge-30 ka-Agasti 2021.
5. I-2021 Essay Scholarship yaBafundi abaDala
Kwakhona, oku sesinye isifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Kwakhona, le ngxowa-mali inikezela umfundi ofanelekileyo ithuba lokuphumelela enye ye- $ 500- $ 1500 yezifundo.
Nangona kunjalo, oku kungumzamo wokuncedisa kwiindleko zokuqhubeka kwemfundo. Ukongeza, unokufumana iinkcukacha ngakumbi kwikhonkco lesicelo elingezantsi.
Imali Award: Ubuncinci be- $ 500.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abe ngumfundi wesikolo esiphakamileyo. Kwakhona, okanye umfundi weekholeji, kubandakanya abagqwesileyo kunye nabagqwesileyo abaphumeleleyo.
Umhla wokugqibela: 30 Oktobha, 2021.
6. Isifundiswa saseKatoni-Ukuxhasa iiprojekthi zenkcubeko
Kwakhona, oku sesinye isifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Kwaye inikwa nguKatoni. Kananjalo inikwa minyaka le umntu omnye okanye abantu abaninzi abafuna inkxaso yemali kwimfundo yabo, ukufundela umsebenzi okanye ukusebenza kwinkcubeko.
Ngaphaya koko, injongo yesifundi kukuxhasa amaDanes kunye nabantu bamanye amazwe abasebenza ngakumbi ukomeleza inkcubeko eDenmark nakwimida yonke.
Ukongeza, inikwe abaphandi. Kwaye abafundi kwihlabathi liphela. Inkcubeko ibandakanya, kodwa ayikhawulelwanga, kunxibelelwano, ulwimi, ifashoni, ubugcisa, amasiko, njl.
Imali Award: $10,000
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abe ngumphandi. Kwakhona, kufuneka ube ngabafundi kunye nabafundi bangaphambili kumaziko emfundo.
Umhla wokugqibela: 1 Meyi, 2021.
7. Ukubhala uKhuphiswano lweeScholarship 2021
Esi sesinye sifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Kwaye enye yeenjongo kukukhuthaza abafundi ukuba baphucule izakhono zabo zokubhala kunye nokuzilolonga ekwenzeni amaphepha aphumeleleyo.
Ke, njengomfundi, ungawamkela umceli mngeni kwaye uthathe inxaxheba kukhuphiswano lwesincoko sokufunda. Kuya kubakho abaphumeleleyo abathathu. Kwaye abathathu abaphumeleleyo baya kufumana amabhaso ezinkozo.
Ukongeza, amaphepha aphambili aya kupapashwa kwiwebhusayithi yokufunda. Kwaye kwimidiya yoluntu. Nangona kunjalo, oko kukuthi ukuba umbhali unike imvume.
Imali Award: $2,000
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abephumelele okanye enze isidanga sokuqala. Kwakhona, akukho mda kubudala, ubuhlanga, okanye isini. Nangona kunjalo, zive ukhululekile ukutyelela ikhonkco lesicelo elingezantsi ngolwazi oluthe kratya.
Umhla wokugqibela: 31 Meyi, 2021.
8. Scholarship yaBona baviwa bagqwesileyo- iYunivesithi yaseKozminski
Le ngxowa-mali inikezelwe kubo bonke abaviwa abasebenza kwi-Bachelor's okanye kwiinkqubo ze-Master zeDyunivesithi yaseKozminski. Kwakhona, sisifundi esenziwe yiYunivesithi yaseKozminski.
Kwakhona, sesinye isifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ngolwazi oluthe kratya malunga nale mfundo, ndwendwela ikhonkco lesicelo elingezantsi.
Imali Award: I-56% yezifundo zesemester- Ilingana ne-7500 PLN.
mfuneko: Ndwendwela ikhonkco lesicelo elingezantsi lolu lwazi.
Umhla wokugqibela: 15 Julayi 2021.
9. IManchester Scholarship yexesha elizeleyo le-MBA
Unyaka nonyaka le mfundo ixhasa uninzi lwabagqatswa abanesiphiwo se-MBA. Kwakhona, ivumela abafaki zicelo abanetalente ithuba lokuxhamla kumava eManchester MBA.
Kwakhona, nceda uqaphele. Esinye sesifundo eJamani exhaswa ngemali ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ngolwazi oluthe kratya malunga nale mfundo, ndwendwela ikhonkco lesicelo elingezantsi.
Imali Award: I- £ 10,000- £ 44,000.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abe neenkcukacha ezifanelekileyo zemfundo. Kwakhona, kufuneka ube nerekodi efanelekileyo yokurekhoda. Unxibelelwano nezakhono zokunxibelelana. Kwakhona, kufuneka ube neenqobo ezisesikweni kunye nokuziphatha. Kwaye ukubanakho ukuba yinkokheli yeshishini ebalaseleyo okanye usomashishini kunye nenxusa elizayo leSikolo.
Umhla wokugqibela: Nge-1 kaJuni, ngo-2021.
10. I-EUSP Scholarship yaBafundi abanetalente eYurophu
Inkqubo ye-EUSP Scholarship yeyabafundi bamanye amazwe kunye nabasekhaya. Kwakhona, unyaka nonyaka, iqela elincinci, elinetalente labafundi abanetalente linikezelwa ngezifundo ezisekwe kwiimfuno.
Oku kuyinxalenye yeNkqubo ye-EUSP yaBafundi yokuxhasa [imfundo yasezibuko. Kumabhaso amaninzi, i-EUSP ithathela ingqalelo impumelelo yezifundo kuphela.
Imali Award: € 1000 ukuya kwi- € 15,000 ngonyaka.
mfuneko: Abafakizicelo kufuneka babe ngabafundi abasisigxina. Kwaye kufuneka ubhalise kwiziko lemfundo elaziwa kwilizwe lonke eYurophu. Kwakhona, kufuneka ube nekholeji encinci ye-GPA ye-3.0.
Umhla wokugqibela: 30 Novemba, 2021.
Oku kungasentla zezinye zezinto ezimangalisayo wokuya eJamani. Yenza kakuhle ukufaka isicelo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokufaka isicelo, qaphela. Qiniseka ukuba uyahlangabezana neemfuno.
Kwakhona, kubalulekile ukuba uthathe iikhrayitheriya zokufaneleka kakhulu. Kungenxa yokuba, unokungafaneleka ukuba awubakhathaleli. Ngapha koko, uhlala ukhululekile ukutyelela eli phepha lewebhu uhlaziyo olunje. Umnqweno omhle
Assessment of the Effect of Political Participation on Service Delivery in Selected Local Governments
Ikhaya lasekhaya loMthetho wamaLungelo abaNtwana, ka-2003 e-Kaduna State: Imiceli mngeni kunye nethemba
Iinombolo zeLottery zokuphumelela iLottery eFlorida kunye nendlela yokujonga isikhokelo esihlaziyiweyo sango-2021
INigeria yokuTshintshiselana ngeSitokhwe yokuThengisa 2020/2021 Bona indlela yokufaka isicelo seNSE
Ungabhalisa njani kwi-UNIUYO yoKwamkelwa koVavanyo loVavanyo 2021/2022
Ikhalenda yezifundo ze-ABUAD 2020/2021 iSeshoni eNtsha yaBafundi abaBuyayo
Regent Microfinance Bank Limited Ukuqesha abagqwesileyo 2020 | Isikhokelo sokuSebenza kunye neemfuno
« Ukuhlaziywa kweBhanki yeHlabathi yeBhanki yeHlabathi ngo-2021 kunye nexesha elisemthethweni
I-17 yeeScholarship zoBunjineli eziFundisiweyo ngokupheleleyo 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal »